“Haddii Farmaajo uusan sawir xamili karin sidee ugu adkaysan karaa tartan doorasho?!” – AAW oo sheegay in laga dejiyey boor xayaysiin ah | Hadalsame Media
Home Wararka “Haddii Farmaajo uusan sawir xamili karin sidee ugu adkaysan karaa tartan doorasho?!”...
“Haddii Farmaajo uusan sawir xamili karin sidee ugu adkaysan karaa tartan doorasho?!” – AAW oo sheegay in laga dejiyey boor xayaysiin ah
(Muqdisho) 04 Nof 2020 – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa cambaareeyey boor iidheh ah oo uu isagu lahaa oo ay fujiyeen ciidan ka tirsan DF Somalia.
Wuxuu soo qoray: “Waxaan canbaareynayaa gabood falka ay Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada ku fujiyeen boor ku dheganaa ka soo horjeedka xarunta Baarlamaanka, oo lagu soo bandhigay sawir muujinaya musharraxnimada xilka Mdaxweynimo ee aan sannadka 2021-ka u taaganahay. Ciidanka ayaa shirkaddii boorarka lahayd u sheegay in uu amar kaga yimid Madaxtooyada.
Guddoonka Wadajir ayaa tillaabadan ku eedeeyey MW DF Somalia wuxuu sidoo kale talo u jeediyey RW Rooble, Md Farmaajo isagoo leh.
“Naguma cusba dulqaad la’aanta musharrax Madaxweyne Maxamed Farmaajo, waxayse tani tijaabo ku tahay Ra’iisul Wasaare Rooble oo ay masuuliyad ka saaran tahay xaqiijinta loolan ay u simanyihiin musharraxiinta xilka u tartamaya ee u Madaxweyne Farmaajo ka mid yahay.
“Haddii uu musharrax Farmaajo xammili karin sawir xayeysiin ah, sidee buu tartan doorasho ugu adkaysan karayaa. Tani waxay cashar horu dhac ah u tahay waxa uu maagan yahay musharrax Madaxweyne Maxamad Farmaajo.
“Waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasheyada, musharraxiinta kale, saxaafadda, bulshada rayidka iyo waxgaradka Soomaaliyeed in ay falkan gurracan si isku mid uga dhiidhiyaan.” Ayuu kusoo afjaray.
Arrintan ayaa ah mid nasiib darro ah oo aan ku habboonayn hannaanka dimoqraadiga ah isla markaana ka horjeedda Xorriyadda Is muujinta.
Previous articleSOOMAALIDA SWEDEN: ”Dhibka uu Trump Soomaalida ku hayo ayaan ula soconnaa doorashada Maraykanka” (Dhegeyso)
Next articleTOOS u daawo: Istanbul BB vs Man United, Zenit vs SS Lazio – LIVE (Shaxda Sugan)